Spillikin - यो के हो? अर्थ र खेल को नियम
पक्कै पनि हरेक मानिस कम्तिमा एक पटक वाक्यांश सुने "को pawns खेल्न।" यो एकदम व्यापक थियो वाक्पद्घति। उहाँले महत्वपूर्ण मामिलामा बेवास्ता, अर्थहीन, अर्थहीन मा लगी भएको छ।
आराम गर्न एक तरिका रूपमा Spillikins
धेरै मान्छे, विशेष गरी बाल्यकाल मा, उहाँलाई विरुद्ध आरोप, "कसरी लामो तपाईं pawns प्ले गर्न सक्नुहुन्छ सुने? राम्रो व्यापार गर्न गर्नुहोस्। " तर कहिले काँही तपाईँले गर्नुपर्ने र टाढा प्राप्त, आराम, मानसिक र शारीरिक आराम। र हामी शाब्दिक अर्थमा pawns को खेल कुरा भने, यो पूर्ण रूपमा यी कार्यहरू सामना गर्न मद्दत गर्छ छ। कुनै कम्प्युटर "शूटर" यति राम्रो बाँकी अनुमति र स्वास्थ्यलाभ गर्नु छैन। तर केही पनि "pawns" को अर्थ थाहा छैन ...
spillikins र कम्प्युटर गेम तुलना
त्यहाँ केही अझ राम्रो र घरपरिवारको मा मान्छे संग कुराकानी गर्न निःशुल्क समय समर्पित र एक रोचक खेल, जो एक तनावमुक्त सकिन्छ साझेदारी गर्न भन्दा रमाइलो छ, तर एकै समयमा धेरै रोमाञ्चक। निस्सन्देह, धेरै यस संग सहमत छैन। कसैले "शूटर", पनि, कसैले, वा पूरै परिवार मिलेर खेल्न सक्छन् भनेर भन्न सक्छ। तथापि, वास्तविकता मा यो बिल्कुल फरक कुरा हो। माउस को सट्टा यो हात spillikin मा हुन राम्रो छ। यो के हो, आज छोराछोरी केही पनि महसुस छैन। कम्प्युटर खेल मान्छे को फलदायी संचार को लागि अनुकूल छैन। मानिस आफ्नो साथी देख र मार्न थियो जो कि हुनु आवश्यक छ कि राक्षस को अनन्त स्ट्रिङ छैन।
यी खेल भिन्नता विशाल छ, सहमत हुनुहुन्छ। छैन तुरुन्तै मनमनै विरोध गर्न र यो दृश्य चुनौती सुरु गर्नुपर्छ। यसलाई आफ्नै अनुभव मा बनाउन राम्रो छ। हामी किन नियम सिक्न र यो पुरातन spillikins प्राप्त गर्न आवश्यकता हो, तर यसको सान्दर्भिकता खेल गुमाएका छैन के। यो क्षणमा त्यो प्रशंसक धेरै छ उल्लेख गर्नुपर्छ। धेरै पुरातन समयका मानिसहरू पराल प्रयोग गरेका छन् - यो एक प्रकारको pawns छ। खेल नियम धेरै सरल छन्। समतल सतह मा एउटा सानो पहाडी straws गिरा, र मान्छे एक सानो कुरा को लागि यो बाहिर प्राप्त गर्न प्रयास पालैपालो लिए। मुख्य अवस्था - सम्पूर्ण ढेर संग बाधा छैन। तिनीहरूले पराल बाहिर हुक प्राप्त गर्नुपर्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हो। त्यस अवस्थामा, straws मा खींच व्यक्ति झुक्किएर आसन्न धक्का भने, पालो अर्को खेलाडी जान्छ। यसलाई सही, सजिलो छ?
चिनियाँ लाठी - यस्तै spillikins
यस्तै खेल पनि पूर्व मा साधारण छ। त्यहाँ उनले रूस आए, र त्यसपछि अलिकति बदल थियो त्यहाँ बाट यो थियो कि एक संस्करण हो। "चपस्टिक" भनिन्छ खेल trifles धेरै समानता छ। तर सामान्य मा यो एक सानो थप जटिल छ। पूर्व मा, मान्छे पराल र लाठी प्रयोग गर्नुभएन। । लगभग 20 सेमी छड grooves मा देख्न सकिन्छ - प्रत्येक सेट मा, त्यहाँ आफ्नो व्यास2मिमी थियो, र लम्बाइ, 35 थिए। कहिलेकाहीं त्यहाँ घन्टी चित्रित छन्। spillikin छ - हामी छडी भनेर भन्न सकिन्छ। यो के हो, तपाईं केही विचार छ।
रूप लाठी र खेल सुरु
तीन, चार - - 4, आठ - 2, पन्ध्र मा - दुई छड5grooves, को छ मा 1 यो खेल को एक जरूरी छ।
केही अवस्थामा, छड को अन्त्य तेज छन्। तर एक पक्ष मात्र। यो grooves संख्या, यति धेरै अंक सफलतापूर्वक rollercoaster छडी देखि एक व्यक्ति बचाव लागि सम्मानित गरिएको छ भनेर बुझ्न सजिलो छ। खेल सुरु रूपमा? लाठी को पहिलो ढेर लिएको, त्यसपछि तिनीहरूले तालिका धारण गर्दै छन्, पक्ष तल औंल्याउनुभयो। पछि यो हात decompressed छ। को लाठी फरक दिशामा छरिएका छन् - तपाईं खेल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
रूसी देखि पूर्वी संस्करण spillikins के distinguishes? बस छडी को पहिलो मामला मा आफ्नो औंलाहरु संग स्लाइड बाहिर झिकेर। तर यो कुरा छैन। कहिलेकाहीं जो पहिलो आकर्षित एक छडी, रूपमा प्रयोग। कसैले 101 अंक प्राप्त गर्दैन रूपमा खेल लामो जारी छ। यो क्षण छ र खेल complicates। आखिर, कसैले बढी हुन्छ भने, त्यसपछि उहाँलाई लागि टाढा 10 लगिनेछ प्रत्येक अतिरिक्त बिन्दु भनेर धेरै मानिसहरू रहन रुचि छैन उल्लेख गर्नुपर्छ: तिनीहरूले धेरै राम्रो spillikin विश्वास गर्छन्। यो के हो, अब तपाईंले थाह छ।
कला काम रूपमा Spillikins
.. Tarelochek, फर्नीचर, उपकरण, आदि सहमत, रोचक: खेल थप रोचक बनाउन प्रयास कुशल कारीगरों, हाम्रो देशमा धेरै छन् जो, सानो वस्तुहरु को एक किसिम को रूप मा pawns गरे। सेट लागि बक्से पनि कहिलेकाहीं एक वास्तविक masterpieces प्रस्तुत, एकदम असामान्य उत्पादन। आधार पनि धेरै फरक थियो: सन्टी, ताडको रूख, वृक्ष।
बच्चाहरु संग प्ले शासकहरुले बीच खेल को लोकप्रियता,
यो खेल मात्र साधारण मान्छे, तर पनि धनी शासकहरुले द्वारा आकर्षित छैन। को आचरण बीचमा पनि यसलाई व्यापक छ। spillikins housewarming वा उत्सव एक सेट प्रस्तुत गर्न - त्यहाँ एक राम्रो परम्परा थियो। तिनीहरूलाई तिर मनोवृत्ति सकारात्मक थियो। चपस्टिक वा pawns प्ले, तपाईं, ध्यान गर्न कुनै पनि अचानक आन्दोलनहरु बनाउन छैन प्रयास गर्नुहोस्, र ध्यान हुनु आवश्यक छ। यसलाई एक निश्चित तनाव र एकाग्रता लाग्छ। यो खेल मा र बच्चाहरु खेल्न गर्नुपर्छ सक्छ: यो विकास बढावा राम्रो मोटर कौशल को। आफ्नो बच्चा सानो खेलौना विस्थापन वा घन यो spillikin गर्न सक्नुहुन्छ। यो के हो, छोराछोरीलाई अक्सर आमाबाबुको सिक्न।
तर spillikins सबै लाभ तिनीहरूले परिवार एकजुट र सँगै मान्छे ल्याउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई अघि पीला।
"टेक्सास होल्डम" (क्यासिनो): खेल को नियम। कसरी जीत?
टेनिस मा रणनीति सट्टेबाजी: सुझाव र उदाहरण
खेल रिच चरा: प्लेयर समीक्षा र प्रणालीको सञ्चालन सिद्धान्त
सरकारी छाप - प्रामाणिकता र विश्वसनीयता को एक विशेषता
को फिडर मा कारास। प्राविधिक समस्याहरू र सुझावहरू
प्रकृति र समारोह: एक आर्थिक वर्ग रूपमा वित्त
Newbies फाटक, बाड। जापोरोझे फैशन आधुनिक रुझान पछि LAG छैन?
जो शहर मा एक स्मारक Viktoru Tsoyu छ?
खराब व्यवहार संग छात्र मा सुविधाहरू। विद्यार्थी गर्न विनिर्देशों अप चित्रकला को नियम
शरीर बोसो लागि लाभ
तपाईं आफ्नो स्नायु प्रणाली चिन्तित छन् भने तपाईंले Google सक्दैन?
न्यूटोनियन तरल पदार्थ र यसको antipode - यो के हो?